Kupinza zvinhu kudzivirira miviri madziro kutungamirira unhani - China Shandong Chen lu
Kupinza zvinhu kudzivirira miviri madziro vatungamirire unhani
HD02 vatungamirire gel (double divi mu refu maoko) 1, basa: iri ainyanya kushandiswa kudzivirira X Ray, anogona maererano vanoshandisa kudiwa ainyanya kushandiswa nemwaranzi kudzivirira (X, wegamma mwaranzi, kudzivirirwa), inodzidzisa anogona kusarudza zvichienderana vanoda kuchengetedzwa dzakatevedzana zvibereko dzakasiyana nokurondedzerwa (kazhinji 0.5 MMPB wegamma mwaranzi kudzivirira vanosarudza). 2. Style: refu ruoko kaviri divi, kudzivirirwa zvikuru nzwisisika; 3. Zvinhu: American kupinza vatungamirire rabha 4. International itsva mhando anodzivirira ha ...
Lead nerokuti: 0.35/0.5/0.75mmpb
basa: nemwaranzi kudzivirira
zvinhu: kutungamirira rabha
HD02 vatungamirire gel (double divi mu refu maoko)
1, basa: iri ainyanya kushandiswa kudzivirira X Ray, anogona maererano vanoshandisa kudiwa ainyanya kushandiswa nemwaranzi kudzivirira (X, wegamma mwaranzi, kudzivirirwa), inodzidzisa anogona kusarudza zvichienderana vanoda kuchengetedzwa dzakatevedzana zvibereko dzakasiyana nokurondedzerwa (kazhinji 0.5 MMPB wegamma mwaranzi kudzivirira vanosarudza).
2. Style: refu ruoko kaviri divi, kudzivirirwa zvikuru nzwisisika;
3. Zvinhu: American kupinza kutungamirira rabha
4. International itsva mhando anodzivirira kutungamirira ganda, international tiite Ultra-chiedza, Ultra-dzakatetepa, Ultra-nyoro unodzivirira zvinhu; Tichienzanisa zvavo kutungamirira zvipfeko, hama kurema 25 kusvika 30 muzana kunogona kuderedzwa.
5. Good kuchengetedzwa mabasa, kutungamirira kuparadzirwa kwazvo yunifomu, zvakajairika kushandiswa mutobvu yakaenzana haangavi attenuate;
6. Muzvitsaurirei 0.35 / 0.5mmPb vatungamirire nerokuti; Pfeka nemishonga, nyore yakachena pamusoro zvinhu kudzivirira mari yako kufadza papi;
Our chikuru zvigadzirwa:
Human muviri kudzivirirwa chikuru zvigadzirwa: X-ray unodzivirira zvipfeko kutungamirira zvipfeko, X-ray unodzivirira siketi, kutungamirira magirazi, kutungamirira sikavha, kutungamirira chivharo, kutungamirira Magorovhosi Chipfeko, kutungamirira magiravhusi, dziviriro gonadal, zamu dziviriro, murindi ruoko, ruoko dziviriro , etc.
Product rokuongorora nzira (1) kuti zvigadzirwa kuedzwawo 80 KVP, 32 Mas, 72 zvatichiri urefu pasi mamiriro X-ray mapikicha, uye ipapo kuchengeta mapikicha firimu iri X-ray firimu, kana kukura hwindo, akati kuwedzera zvinhu ukobvu, tibatsirwe nemwaranzi hwakasimba. (2) kana ikaramba rima, pakukora mashoko ari nzvimbo dzinoshandurwa. (3) kana kumucheto rima panzvimbo chakajeka, zvingava zvakafanira kukuvadza kune zvemukati unodzivirira zvinhu, izvo kazhinji kunokonzerwa nokushandisa zvisiri rokudzivirira zvipfeko. (4) Kana paine shoma rima makwapa, anogadzirwa panguva pagadzirwe unodzivirira zvipfeko, zvakadai pinhole. Kunoratidzwa kurapwa uchapupu kuti rima panzvimbo ine dhayamita vasina kupfuura 5mm hakumbokanganisi unodzivirira mugumisiro. Kana nhamba rima makwapa hombe pane 5mm zvinowanikwa, kana diki uye rima makwapa zhinji dzinofanira kuonekwa, zvinofanira kucherechedzwa. (5) kana paine refu mumvuri, zvinoratidza kuti vatungamirire rabha anogona kuputsa munharaunda, izvo zviri kukonzerwa okuchengetera kukodzera rokudzivirira zvipfeko. Product Nokuraramisa (1) chigadzirwa ichi haafaniri pachena kuti chiedza chezuva, isa kure Kupisa kupi, uye haigoni kutaura nedzimwe zvinogadzirwa zvakadai pendi, acid, alkali, nezvimwewo (2) chigadzirwa ichi chinofanira kuchengetwa mune zvakanaka ventilated uye muchitonhorera uye yakaoma kamuri. The tembiricha iri 0-30 madhigirii, uye hama tembiricha iri 80%. HC06 Anti-kupfeka chete madziro kutungamirira repfuti: nakisa nyoro kutungamirira rabha Style: kunyange muviri mhando kutungamirira kugutsikana: 025, 035, 05mmpb; Model: L, M, S; Makuriro Akaita chikumbiro: kushandiswa radiological chirwere evanhu muviri kudzivirirwa. Makore kushandiswa: nyika ine wakaiswa kwemakore 4-5, kwazvo urefu kushandiswa kana kakawanda kushandiswa, uye anogona kutarisa kudzivirira kunoita unodzivirira suit pamusoro wayo. Ongorora nzira: shandisa ruoko sandara kubata kana kubvisa mucheka pemvura, neziso simba pakuongorora, kana paine chetatu mitswi, chigadzirwa havagoni kushandisa, anofanira chinyorwa kubva update. Kana nyanzvi dose detector anogona kuziva rwakadini nemwaranzi attenuation, zvinokosha kuona kuti kudzivirira zvigadzirwa aifanira kutsiviwa.
Previous: Chen Lu mashoma zvinhu unodzivirira kutungamirira bhachi hafu - ruoko miviri - ruoko
Next: Unodzivirira kutungamirira vanamajasi kuti kupinza zvinhu zvinogona customized pamwe 0.5 vatungamirire nerokuti.
0.25mmpb Tungamirira Clothes Price
2017 Newest Fashion Type Cheap Kutungamirira Apron
China Factory Supply Color Customized X-Ray Protective Thyroid chipika For Neck
Custom Made Lead Rubber Chipfuva Kudzivirira
Customized New Design Cheap X Ray Radiation Protective Kutungamirira Apron
Customized X-Ray Protection Kutungamirira Vest
Dental Protective X-Ray siketi
Dental X-Ray Kurusununguko Apron
Good Price Kutungamirira Rubber X Ray Protection Gown No Sleeve Apron
High Quality Kurusununguko Apron
Tungamirira Apron X Ray Protection
Medical Protective Kutungamirira Protective Apron
Medical Radiation Protective Accessories Products X-Ray Kurusununguko Apron
Medical Rediation Protective Kurusununguko Apron Rack
ovary Protective X Ray kutungamirira Apron
Protection X-ray kutungamirira epuroni
Radiation Protection Kurusununguko Apron Price
X Ray Protective Kutungamirira Aprons
X Ray Protective Kutungamirira Vest
X-Ray Kurusununguko Apron
X-Ray Kurusununguko Apron For Sale
X-Ray Protection Kurusununguko Apron
X-Ray Protective Kurusununguko Apron
X-Ray Protective Kutungamirira Gloves
Xray unodzivirira nemwaranzi kutungamirira epuroni
X-Ray kudzivirirwa Lead Apron
Chen Lu kuti mwaranzi-uchapupu repfuti ane va zvakanaka ...